Madaxweyne Farmaajo oo kulan deg deg ah isugu yeeray Xisbiyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Farmaajo oo kulan deg deg ah isugu yeeray Xisbiyada
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shir deg deg ah isugu yeeray Xisbiyadda dalka ka jira ee ay diwaangaliyeen Guddiga doorashooyinka Qaranka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir waxaa uu isugu yeeray Xisbiyada ka jira dalka ee u diiwaan gashan Guddiga doorashooyinka.
Xubno ka mid ah Xisbiyada kajira dalka ayaa xaqiijiyey in kulankaas uu ugu yeeray Maalinta berito ah,isla markaana uu kusoo wargeliyey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya Nuur Xersi Fuursade.
Lama shaacin waxyaabaha uu Madaxweyne Farmaajo kala hadli doono Xisbiyada kajira dalka,hayeeshee wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in uu kala hadli doono arrimo la xiriira doorashooyinka soo socda ee la filayo inay dhacaan sanadka 2021.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Maanta kulan gaar ah waxaa uu Madaxtooyada kula qaatay Xubnaha sar sare ee Madasha Xisbiyada,iyada oo ay ka wada hadleen Arrimo dhowr ah.
Xubno ka mid ah xisbiyadda ayaa Risaala u sheegay in Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda uu ku wargaliyay Casuumadda Madaxweyne Farmaajo.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo xisbiyadda ayaa dhici doona maalinta berri ah.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo waxyaabaha laga wada hadli doono, waxaana casuumaadaan ay timid xilli maanta uu la kulmay Madasha Xisbiyadda Qaran ee dalka